Voafaoka ao anatin’izany ny mpilalao, ny mpanatontosa, eny hatramin’ireo mpamokatra. Tsy hipetra-potsiny ny OMACI manoloana izany fa hamolavola volavolan-dalàna entina hitsinjovana ireo mpisehatra amin’ity filalaovana sarimihetsika ity izay tena miroborobo sy mahazo vahana tokoa eto amintsika. Ankoatra izay dia fantatra fa handray fepetra mikasika ny tsy fanarahan-dalàna hataon’ireo olona mpanaparitaka ny sangan’asan’ ireo mpilalao sarimihetsika eto amintsika tsy amim-piheverana ihany koa ny OMACI. Lohalaharana amin’izany ny piraty. Nomarihin’ity tale jeneralin’ny OMACI ity hatrany moa fa ho avy tsy ho ela ny ny fananganana sekoly natokana hianarana sarimihetsika eto Madagasikara mba hahamatihanina tanteraka ity sehatra iray ity. Tsy maintsy hankatoavin’ny fanjakana anefa ny sekoly vao afaka hiasa sy handray ireo mpianatra liana. Efa mipetrapetraka avokoa ireo ho an’ny mpihira Malagasy na dia mbola misy ihany aza ny indro kely.